मेरो १ years बर्ष अघि र अहिले। मैले पढेका र पढ्ने किताबहरू। | वर्तमान साहित्य
मेरो १ years बर्ष अघि र अहिले। मैले पढेका र पढ्ने किताबहरू।
मारियोला डियाज-क्यानो अरेवलो | | किताबहरु, युवा साहित्य, नोभेला, कालो उपन्यास, रोमान्स उपन्यास, कथाहरू
मेरो उमेर १ years बर्षको।
Hoy म 13 वर्ष को भए। दोस्रो १ that कि तिनीहरूले मलाई .ण दिएका छन्। 13 मा एक दिउँसो जीवन र मृत्यु मेरा पत्रहरू सडकको छेउमा फेला पर्‍यो। यसले केहि सेकेन्ड लिन सक्‍यो। मृत्यु एसेसको पोकरको साथ थियो। जीवन, रंगको भर्या .को साथ। हृदय त्यसो भए म अझै यहि छु। पढ्ने, लेख्ने, संगीत सुन्ने, मेरो परिवार र साथीहरूको मज्जा लिने, र कि भाग्य को लागी एक वर्ष धन्यवाद दिदै खेलमा।
त्यसो कि पैरा उत्सव मेरो तेह्रौं जन्मदिन encore, म धेरै उत्साहित छु पठन पुन: प्राप्त गर्नुहोस् पहिलो १ of को र तिनीहरूलाई दोस्रोको धेरैसँग तुलना गर्नुहोस्। ती केहि नमूनाहरू हुन्। हुनसक्छ सेयर केहि। ओह र तपाईको बधाईको लागि धन्यबाद।
1 मेरो पहिलो १ years बर्ष
2 मेरो दोस्रो १ years बर्ष
मेरो पहिलो १ years बर्ष
मेरो पहिलो १ years बर्ष को पुस्तकहरु
सबै थिए उपहारहरूनिस्सन्देह। र बाँकीमा, को बहुमत प्रतिनिधित्व नोट गर्नुहोस् ट्यूटोनिक लेखकहरू। मलाई विशेष स्नेह छ छोटो भूत कथाहरू। सम्भव भएको सुधार गर्न को लागी उत्तर अमेरिकी र बेलायती क्लासिक्स ती जस्तै चिसो। समावेश निन्द्रा उपत्यकाको कथा इरभि from बाट, क्यान्टरभिल भूत Wilde बाट, प्लेग राजा पो बाट, तेस्रो व्यक्ति हेनरी जेम्स र द्वारा लौरा साकीबाट, बर्मीका जन्मे स्कटिश जन्मजात लेखक हेक्टर ह्यूग मुन्रोको उपनाम।
ती वर्षहरूको नयाँ रिलीजहरूको के थियो, आज युवा साहित्यहरूको क्लासिक्स। के बारे मा पहिले नै भन्न सकिन्छ मोमो o अन्तहीन कथा जर्मन माइकल एंडे द्वारा? मलाई थाहा छ मैले अघि पढें मोमो, तर असीम प्रभाव संग थियो अन्तहीन कथा, मैले कल्पना गरे जस्तै यो उमेरमा पढ्ने सबै बच्चाहरूसँग हुनेछ। संरचना, ती अक्षरहरूमा पाठको विभाजन हरियो र रातो र that जसले संसार र वर्णहरूलाई अलग गर्‍यो... र यी सबै विश्वासको भावना माथि, सेबेस्टियन जस्ता, तपाईंसँग थियो जादू पुस्तक हात बीच
समयको क्रमसँगसँगै मलाई रीडिंगका साथ धेरै कुरा छन् जुन कहिलेकाँही मलाई तिनीहरूसँग नजिक बनाएको छ। ऊ उत्साह, उब्रे र आश्चर्य बाट पनि बाहिर, किनभने उसले आफूले पढिरहेको कुरा विश्वास गरेन। तर तिनीहरू थिएनन् र त्यस्तो पनि थिएनन् धेरै वास्तविक महसुस दुई संसार बीच बस्न। माथि उडान गर्न फजुर con अत्रय्यू, मा बस्ने को आइवरी टावर शिशु महारानी संग, मलाई आतंकित गर्न र यति धेरै मोहित गर्न Gmork र नाडा मलाई निल्न लागिरहेको छ।
तपाईं जहाँ भए पनि सम्भवतः त्यहाँ फन्टासियामा हुनुहुन्छ, श्री। माइकल एन्डे सधैंभरि बाँच्नेछन् लाखौं बच्चाहरु मा जसले सिकेको छ (र सिकेको) लाई पुस्तकहरु मनपर्दछ कि पढ्न को लागी धन्यवाद।
को भारी भावना र को लागी भक्ति अन्तहीन कथा, कल्पना शैली मेरो ध्यान आकर्षित गर्न को लागी जारी छैन। म उनको तिर अधिक गए यथार्थ र इतिहासयद्यपि सँधै मुख्य विषयवस्तुहरूका साथ राम्रो, दुष्ट र प्रेम.
क्लाउडिया एक क्लब गठन गर्दछ, जर्मन बाट मारिया फिशर, मेरो व्यक्तिगत वयस्क जीवन (वा कथित वयस्क) मा प्रतिबिम्बको रूपमा उनीहरूले भन्न खोजेको कुराका लागि सबैभन्दा उत्सुक मध्ये एक हो। क्लाउडियाको कथा, एक किशोर जसले फ्यान क्लब गठन एक सफल गायक को, यो एक चरित्रको साथ मेरो पहिलो वास्तविक पहिचान हो। A प्रत्याशित ऐना त्यसोभए के भएको छ। म अरू केहि भन्दिन। म मात्र तपाईंलाई निर्देशन दिनेछु यहाँ र तपाईं बुझ्नुहुन्छ यदि तपाईं चुपचाप हिंड्नुभयो भने।
को लागी जब हिटलरले गुलाबी खरायो चोरे, पनि जर्मन बाट जुडिथ केर, युवा साहित्यको अर्को क्लासिक हो। सबै प्रोत्साहन संग शिक्षाप्रद यस्तो महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक कालक्रममा यहूदी सानाको सानो साना र उनको परिवारको कथा सेट गरिएको छ। स्विट्जरल्याण्ड, फ्रान्स र अन्त्यमा लन्डनमा उनको भाग्ने र भड्किलो ए मनलाग्दो र भावनाहरु को पूर्ण रूपमा शान्त.
र अन्तमा, त्यो मामूली स्कटिश देश चिकित्सक, को नायक एक कालो ब्रीफकेस को रोमांचमैले पछि सिर्जना गरेको चीजहरूको लागि पनि यो मेरो पहिलो साहित्यिक प्रभाव हो। धेरै पढिएको हल्का वजन, परम्परागत कटजुन मेरा पछिका स्वादहरूलाई पनि आकार दिन्छ।
मेरो दोस्रो १ years बर्ष
मेरो दोस्रो १ from बर्षको केहि पुस्तकहरू
यी शीर्षकहरू सबैभन्दा प्रतिनिधि हुन् भनेर विचार गर्न असम्भव छ। तिनीहरू मेरो दोस्रो १ years बर्ष हो, त्यहाँ कुनै तुलना छैन। म ब्रेनकेक स्पीडमा पढ्छु, स्वादको अनुरूप भन्दा बढी। अन्य आँखाका साथ, छोटकरीमा। मैले खोजी गरिरहेछु, तर यो पहिले नै भिन्न छ। तपाईं पहिले नै सब भन्दा सटीक संवेदनाहरूको खोजी गर्दै हुनुहुन्छ। तपाईंसँग घोडा जित्ने छ वा तपाईंलाई थाँहा छ कि तिनीहरूले तपाईंलाई थोरै असफल गर्नेछन्।
ती शीर्षकहरूमा म तिनीहरू स्वीकार गर्न सक्छु विजेताहरु। अधिक? ठिक छ, म यो भन्दिन, म लसुन भन्दा धेरै आफूलाई दोहोर्‍याउँछु। तर वास्तविकता तिनीहरू सबै हुन्। यसको फारममा, यसको सामग्रीको लागि ... सबै, बाहेक कुरूपका लागि संगीत, द्वारा हस्ताक्षर गरिएको सुन्दर प्रेम कहानी लोरेन्जो सिल्भा, श्रृंखलासँग सम्बन्धित छ। तीन कालो (रिडिमर, रेड स्क्वायर, लेनोक्स), क रोमान्टिक (टाटियाना र अलेक्ज्याण्डर) र एक ऐतिहासिक (पेरिस को बाह्र बच्चाहरु).
एक जो मलाई भन्दा अधिक दु: ख दिन्छ आएको छैन स्पेनीका आँखामा त्यो छ टिम दिउँसो। दुबै ऐतिहासिक र कालो ब्रिटिश लेखकको एक टुक्रा, जसको कार्यले यी जन्मभूमिहरूमा थोरै न्याय पाएको छ। Nap पहिलो पुस्तक प्रकाशित भयो, आदेश, एक अत्यावश्यक ऐतिहासिक उपन्यास शीर्षक जुन म अत्यधिक सिफारिश गर्दछु। जो जसले सेक्सन भाषा नियन्त्रण गर्दछ यो दोस्रो लिनु पर्छ। यो गाह्रो छ तर यो धेरै मूल्यवान छ.
अरुहरु, मन पराइएको को प्राथमिकता। कालो विधाको सर्वश्रेष्ठ क्यारेक्टरको राम्रो भागको साथ। एक निश्चित संग ह्यारी प्वाल, ahem, melancholic र रुसी अर्काडी रेन्को o Lennox, cynical 50s ग्रे ग्लासगो जासूस, द्वारा बनाईएको क्रेग रसल। र को टाटियाना र अलेक्ज्याण्डर सबैभन्दा रोमान्टिकको लागि त्यो पर्याप्त छ त्यहाँ बराबर साझेदार छैन.
लेखको पूर्ण मार्ग: वर्तमान साहित्य » साहित्य » किताबहरु » मेरो १ years बर्ष अघि र अहिले। मैले पढेका र पढ्ने किताबहरू।
समीक्षा: एल कार्बोनिरो, कार्लोस सोटो फेमेना द्वारा
आरएईले नयाँ शब्दहरू समावेश गर्दै वर्ष सुरू गर्‍यो